Talyaaniga ayaa Xeebaha Dalka Somaliya u soo diray Maraakiibtiisa Dalgaalka | maakhir.com
Talyaaniga ayaa Xeebaha Dalka Somaliya u soo diray Maraakiibtiisa Dalgaalka
February 8, 2008 in Somalia
Rooma:- Dawlada Dalkaasi Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday inay xeebaha Dalka Somaliya u soo diraysa ilaa 6- Marakab oo Nooca Dagaalka ah, Talyaaniga ayaa sheegay inay maraakiibtaasi Ugaadhsan doonaan Budhacada Somaliyeed ee qafaalatay Gaadiidka Bada Somaliya Mushaaxaya,waxa la cadeeyay inay Maraakiibta Talyaanigu ay haatan jooga meel xeeb ah oo dhaw Dalka Masar.
Maraakiibta Talyaaniga ayaa waxay haatan ku sugan yihiin gacanka ama Qooriga Suweys-ka ee wadank Masar waxaana lagu wadaa inay ka soo gudbaan badda Cas ee gacanka cadmeed, saraakiisha hawlgalkaasi hogaaminaysa ayaa sheegay inay u dhaqaaqi doonaan dhanka Bari ee Xeebaha Dalka Somaliya halkaasi oo mudooyinkan ay ka soo yeedhaysay qayla dhaan Ba”an.
Af hayeen u hadlay Dawlada Talyaaniga ayaa sheegay inay hawl galkaasi ka codsatay Dawlada Somaliya iyada oo Dawlada Somaliya ka dal batay Dalka Talyaaniga inay gacan ka siiyaan sii loo xakamayn lahaa Budhcad Badeeda Somaliyeed.
Horey ayaa xeebaha Soomaaliya waxaa hawlgalo uga wadey Maraakiib dagaal iyo ciidamo ka socda Isbahaysi Mareykanka uu horseed ka yahay oo wacad ku maray inay ugaadhsan doonaan kooxaha burcad badeedka ah ee xeebaha Soomaaliya ka af duuba Maraakiibta Gar Gaarka ah iyo waliba kuwa Ganacsatada Somaliyeedba.
Meesha ugu badan ee haatan laga soo qaylinayo ayaa ah Xeebta Degmada AYl ee ka tirsan Gobolka Nugaal halkaasi oo haatan lagu haysto 2-Markab oo laga kala leeyahay Dalka Ruushka iyo Indonisai, waxa la sheegay inay Budhcadaasi maraakiibta qafaaltay ay codsadeen in la siiyo Aduun lacag ah oo madax furasho ay ku sheegeen.
Maamulka Goboleedka la baxay Puntland ayaa arintaasi ku guul darastay inuu wax ka qabto iyaga oo dhawor jeer arintaasi dad u xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii loo samata bixin lahaa maraakiibtaasi.
« Reer Bosaaso oo dhexda u xidhay inay U gurmadaan dadkii ka bad baaday Qaraxii Bosaaso ka dhacay
C/laahi Yuusuf iyo Mela Zanawi oo shir Alaabadu u xidhanyihiin wada qaatay »